Tsy to teny… mahato fo | NewsMada
Tsy to teny… mahato fo
Mihasarotra ary vao mainka manahirana ny toe-draharaham-pirenena. Misavoritana velona. Nahoana? Samy manao izay saim-pantany tsinona. Mila tsy ho fantatra intsony ny hoe: iza no manao inona, aiza ary mankaiza?
Na izay hoe vahaolana aza, miteraka olana vaovao hafa indray. Izay ny didy fanapahan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), ny 25 mey? Tsy hita izay tena marina, fankatoavana, fanatanterahana…
Tsy to teny ny HCC? Nampihaona ireo mpanao politika ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy (CFM), na tsy voatery hisy aza ny fifanarahana politika. Ady saritaka ny raharaha, fa hoe fizarana seza no ao ambadika.
Tsy manaiky ny fifanarahana politika… fizarana seza ny depioten’ny fanovana. Mila tanterahina ny fanapahan’ny HCC: fandravana governemanta, fanendrena praiminisitra araka ny And. 54 amin’ny lalàmpanorenana.
Namoaka fanambarana ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, fa hiroso amin’ny hoe toe-draharaham-pirenena manokana ny fitondram-panjakana, raha tsy misy ny fifanarahana politika… hamaha ny olana politika.
Amin’izany, samy tsy to teny izany ny HCC sy ny CFM? Na misy ny tsy mahandry tantana. Nampiaka-peo amin’ny ramatahora isaky izay miteny ny Foloalindahy: miaro ny mpitondra sa ny vahoaka sy ny fananany?
Tsy ny fahefana sivily na ny fahefana mpanatanteraka ve no tokony ho nampahatsiahy ny amin’izay hirosoana amin’ny toe-draharaham-pirenena manokana izay? Ny Foloalindahy tsinona no hoe aroriaka farany.
Ho to teny koa ve ny Foloalindahy miandany… handrobaka fahefana? Ny toy izao no mampijabaka ny vahiny, fa tsy mahay mifandamina ny samy Malagasy. Iza no tena mbola to teny, iza no tena aroriaka farany?
Eo ny fiangonana amin’ny alalan’ny FFKM, ohatra. Saingy ara-panahy sy moraly ny raharaha, hany ka sarotra sy manahirana ny sasany: tia tena, ratsy toetra, mpandainga, mpihatsaravelatsihy…
Hiandry ny vahoaka tena hitroatra sy ho to fo tanteraka vao ho tonga fanahy sy hahatsapa fa tsy mety ny ataon’ny tena?